Moe Kai: December 2013
မြန်မာမှာ SEA Games တွေ လုပ်နေတာ မြန်မာ ဘောလုံးပွဲတွေ ကြည့်ပြီးတော့ တချို. အားကစားသမားတွေ အထူးသဖြင့် မလေးရှားက ဘောလုံးသမားတွေ Kinesio Tape တွေ ကပ်ထားတာ သတိထားမိလိုက်ပါတယ်။
အားကစား ဆေးပညာမှာ ဒီ Tape တွေ ကို အလွန်.အလွန် သုံးကြပါတယ်။ ဥပမာ ဘောလုံးပွဲ တခုမစခင် သူတို.ရဲ. အဝတ်လဲခန်းထဲ ဝင်ကြည့်လိုက်ရင် ဘောလုံးသမားတွေ တယောက်ပြီး တယောက် Tape တွေများစွာနဲ အလွန် အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ Physiotherapist ကို တွေ.ရပါလိမ့်မယ်။ တခြားအားကစားတွေမှာ ခန္တာကိုယ် နေရာအနှံ. ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဘောလုံးမှာတော အများဆုံး လိုအပ်တတ်တာ ခြေကျင်းဝတ်ပါ။ မြန်မာ ဘောလုံးသမား ကျော်လင်းလို ခြေကျင်းဝတ် ဒါဏ်ရာမရအောင်၊ ရပြီးသား ဒါဏ်ရာ ပြန်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို. ဆိုပါတော့။
ဒါနဲ. Tape အကြောင်းနဲနဲ ရှင်းပြရရင် အဓိက အခြေခံအားဖြင့်တော့ ၂မျိုးရှိပါတယ်။
ပထမ တမျိုးက Athletic tape ဒါမှမဟုတ် Zine Oxide tape လို.ခေါ်တာပါ။ ဒီ tape ရဲ. အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ခန္ဓာကိုယ်မှာ Support ဒါမှမဟုတ် Stability ရအောင် အတွက် သုံးပါတယ်။ ဥပမာ ခြေကျင်းဝတ်က အရွတ် (Ligament) ဒါဏ်ရာ ရသွားတယ် ဆိုပါတော့။ ဒီ Zinc Oxide tape နဲ.သုံးပြီး ခြေကျင်းဝတ်ရဲ. လှုပ်ရှားမှုကို အထောက့်အပံ့ ဖြစ်အောင်၊ ခြေခေါက်လဲတာကို ကာကွယ်ရအောင် သုံးပါတယ်။ ဒီ tape ရဲ. ကောင်းကျိုးဟာ သုတေသန စာစောင်တွေ များစွာမှာ သက်သေပြုထားပြီးသားပါ။
ဒုတိယ Tape အမျိုးအစားကတော့ Kinesiology tape လို.ခေါ်ပါတယ်။ ဂျပန်ကြီး တယောက် ရှာတွေ.ပြီး စတင် အသုံးပြုခဲ့တာပါ။ ဒီ tape ကိုတော့ နာနေတဲ့ ကြွက်သားကို အနာရော့အောင်၊ ကြွက်သားရဲ. ဝန်နဲအောင် လုပ်လို.ရသလို (Muscle inhibition and reduce loading)၊ သိပ် အသုံးမပြုမိတဲ့ ကြွက်သားတွေကို နှိုးဆွစေဖို. အနေနဲ.လဲ (Activation) သုံးလို.ရပါတယ်။ ဒါဏ်ရာရထားတဲ့ နေရာကို (ဥပမာ ဘောလုံးကန်ရင်း ကိုယ့်ပေါင်ကို မတော်မဆ အကန် ခံရတယ် ဆိုပါတော့) ဒါနဲ. ကပ်ထားရင် နောက်နေ. ရောင်လာတာ မရှိအောင် အရောင်နဲအောင် ကာကွယ်လို.ရပါတယ်။ တချို. အရွတ်တွေ ရောင်တယ် နာတယ်ဆိုရင်လဲ (Tendinopathy) ဒါလေးသာ ကျွမ်းကျင်စွာ နည်းလမ်းကျအောင် ကပ်ပေးလိုက်၊ အနာက ချက်ချင်း ပျောက်သွားပြီး လူနာ ကျေးဇူး အတန်တန် တင်တာကို ခံရတတ်ပါတယ်။ တခါတရံ.မှာ ပြတ်နေ ဒါဏ်ရာရနေတဲ့ အဆစ်နဲ. အရွတ် အတွက် အသုံးပြုလို.ရပေမယ့် athletic tape လောက်တော့ support မလုပ်ပေးနိုင်ပါ။ နိုင်ငံ အတော်များများရဲ. အားကစား ဆေးပညာမှာ အလွန် ပေါ်ပြူလာဖြစ် အသုံးများတဲ့ tape ပါ။ အရောင်မျိုးစုံ ဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ.လဲ လာပါတယ်။ သုတေသနတွေမှာ သူ.ရဲ. ကောင်းကျိုးကို အသေအချာ သက်သေမပြနိုင်ပေမယ့် အားကစား ဆေးပညာမှာတော့ အလွန်အသုံးများတဲ့ အရေးပါတဲ့ အရာ တခုပါပဲ။
အဓိက အားကစား ဆေးပညာမှာ သုံးတဲ့ Tape တွေရဲ. အကြောင်း အတိုချုပ်ကတော့ ဒီမျှပါပဲရှင်။
Disclaimer: Photos are taken from the internet randomly. No copyright infringement intended.
ကဲကဲ အားလုံး Facebook မှာ ဒီလောက် ဆူဆူညံညံ ဒီဘောလုံးပွဲ အကြောင်းပဲ ပြောနေကြတာ ကျမလဲ ဝင်ပြီး တခုခုတော့ ပြောချင်လာပြီ။
မြန်မာ အမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်းက ကမ္ဘာ့ အဆင့်မှာ နာပါတ် ၄၀တဲ့။ အမျိုးသားအသင်းကတော့ ၁၄၀တဲ့။ ဒါတောင် ထိုင်းအသင်းထက် တို.က အပေါ်မှာ ရောက်နေသေးတယ်။ FIFA ရဲ. အဆိုအရပေါ့။
မနေ.က မြန်မာအမျိုးသမီး ဘောလုံးပွဲကို အလုပ်က ပြန်လာပြီး နဲနဲလေး ကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ တို.မြန်မာတွေ အတော့်ကို တော်ပါတယ်။ ဂိုးလ်သွင်းတဲ့ Finishing အပိုင်းလေးပဲပဲ နဲနဲ စိတ်ရှည်ဖိုနဲ. တိုးတက်ဖို.လိုနေတာ။ ကန်လိုက်တဲ့ ဘောလုံးတွေဆိုတာ လိုရာ Target မရောက်ပဲ ဂိုးလွန်ဘောတွေခြည်း ဖြစ်ဖြစ်သွားရတာ။
နောက် လူကျွန်ဘောအဖြစ် အပါယ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဂိုးကတော့ ဒိုင်လူကြီးရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။
FIFA ရဲ. အခု အသစ်ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းအရ ဘောလုံးသမားဟာ လူကျွန်တဲ့နေရာမှာ ရှိနေလို.ရပါတယ်။ သူ.က ဘောလုံးကို ဝင်မကစားရင် (သူ.ဆီကို ဘောလုံးပေးလိုက်တာ၊ သူ.ကိုယ် ခြေထောက်နဲ ဘောလုံးကိုထိပြီး ဂိုးဝင်သွားတာမျိုး) ဒါမှမဟုတ် တခြားအသင်းရဲ. ကစားတာကို အနှောက်အယှက် ဖြစ်အောင် မလုပ်ရင် (ဥပမာ ဂိုးသမား မမြင်ရအောင် ကာထားတာမျိုး) လူကျွန်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပေမယ့် လူကျွန်ဘော အဖြစ် ပြစ်ဒဏ်ပေးလို.မရပါ။
ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ. အသုံးမကျမှု၊ မှားယွင်းမှု တခုဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ပြည်သူတွေ အတွက် ဘယ်လောက်များ ထိခိုက်နစ်နာ သွားရသလဲဆိုတာ။
အရင်က ကျမပြောတတ်တဲ့ ဆရာဝန်ဆိုတာ လူ.အသက်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာမို. အမှားအယွင်း အဖြစ်မခံဘူးဆိုတာ။ အခုနောက်ပိုင်း ကျမ တွေးမိနေတာ ဒီဘောလုံးဒိုင်လူကြီးတွေဆိုတာ အဆုံးအဖြတ် မှားယွင်းမှုဟာ ဘယ်လောက်အထိ တာရောက်တယ် သန်းခြည်တဲ့ လူတွေကို ထိခိုက်နိုင်တယ် ဆိုတာ။ သူတိုလဲ့ လူသားပါဆိုပေမယ် အမှား အယွင်းမရှိအောင် ၂ဆ ၃ဆ ပိုပြီးတောင် ဂရုစိုက်သင့် သတိထားသင့်တာပါ။
တလောက သူငယ်ချင်းတွေနဲ ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်။ Premier League ဘောလုံးပွဲတွေရဲ. အကြောင်းနဲ. ပက်သက်လို.ပေါ့။ တချို.သော ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ. ညံ့ဖျင်းတဲ့ ဆုံဖြတ်ချက်တွေ အကြောင်းနဲ ပက်သက်ပြီးတော့လေ။ ခုတိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ. ဘောလုံးပွဲတခုရဲ. ကံကြမ္မာကို ဒီ ဒိုင်လူကြီး ၃ယောက် (မျက်စိခြောက်လုံး) ရဲ လက်ထဲ ဝကွက်မအပ်ထား သင့်တော့ပါဘူး။ Camera တွေ Video Analysis တွေကို ပြန်ကြည့်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်ပါပြီ လို.။
photo taken from Hello Magazine
ဆေးစာအကြောင်း ရေးစရာတွေ အများကြီး တွေးမိပေမယ့် မဆီမဆိုင် ရောက်ရာပေါက်ရာ တွေးမိတာလေးတခု အရင်ရေးလိုက်ပါဦးမယ်။ Christmas ကနီးပြီဆိုတော့ ဒီရက်ပိုင်း Christmas party တွေတက်ရတော့ မလိမ်းဖူးတဲ့ မိတ်ကပ်တွေ လိမ်းဖို.ပြင်ရဆင်ရပါတယ်။ လူကလဲ ဒီနှစ်တော့ နဲနဲ လှချင်နေတယ်ဆိုတော့လေ။ အင်တာနက်မှာ မိတ်ကပ်လိမ်းနည်းလေးတွေ လိုက်ရှာ၊ tutorial တွေကြည့် အတုခိုး နည်းလမ်းယူရတာပေါ့နော်။ အင်တာနက်ရဲ မြောက်များလှစွာသော အကျိုးအမြတ်များမှ တခုပေါ့။
အဲဒီတော့ အင်တာနက်မှာ ကောင်မလေး အများစုကြားမှာ တော်တော်လိမ်းကြတာ ခေတ်စားတာ Concealer လိုခေါ်တဲ့ အရာ တခုအကြောင်း ရှာဖွေတွေ.ရှိ လာပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ဝက်ခြံ အမာရွတ် မျက်စိအောက်မှာ ညိုနေတာတွေ အသားရည်တွန်.တာတွေကို Concealer လေးနဲ. တို.ပြီး အသာလေး လိမ်းထားလိုက်တော့ ကိုယ့်ရဲ. အနာအစာ ရုပ်ဆိုးနေတာတွေက မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့။ တကယ့်ကို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး ရုပ်ဆိုးနေတဲ့သူတွေတောင် ပြစ်မျိုး မှဲ.မထင်လှသွားအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါနဲ. ကျမလဲ ပထမတော့ သူတို.လိမ်းပြသလို Concealer လေး နဲ. ပြစ်မျိုးမှဲ.မထင် လှချင်ယောင်ဆောင်ရဦးမလား စဉ်းစားမိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်တွေးကြည့်ပြန်တော့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် မလုံဖြစ်လာတယ်။ မလှပဲ Concealer တွေ အုပ်ပြီး လှချင်ယောင်ဆောင်ရမလား ဆိုပြီးတော့လေ။
ကျမအတွက်တော့ ကိုယ့်ရဲ. အပြစ်အနာအစာတွေကို မရှက်မကြောက်ပဲ လက်ခံတတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတာကသာ အလှဆုံးပါ။ အသက်ကြီးလာလို တွန်.လာတဲ့ အသားအရည်၊ ပိုထူလာတဲ့ မှဲခြောက်တွေကို ဖုံးကွယ်နေမယ့်အစား ဒါ အသက်အရွယ်နဲ. အတူရလာတဲ့ အလှတရားတွေလို. လက်ခံပြီး ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ. နေတတ်ရင် အဲဒီလူဟာ ပိုလှသွားမလားပဲ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရလဲ တွေးကြည့်ပါ။ လူတိုင်းမှာ အားနည်ချက် တွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကျမဆိုရင် အရပ်ပုပါတယ်။ စကားမပီပါ။ ရုပ်လဲမလှပါ။ သွားလေးနဲနဲ ခေါသလို၊ ထိပ်ကလဲ အသက်ကြီးပြီး ပြောင်ချင်လာပါပြီ (ဟင့် ရွှတ်) တခါတလေ အူကြောင်ကြောင် အတွေးမျိုးတွေလဲ ရှိတတ်ပါသေးတယ်။ ဒါတွေ ဆက် ပြောရရင်တော့ ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင် အများကြီးပါ။
ဒီအားနည်းချက်တွေကို လိုက်ဖုံးကွယ်ပြီး ဟန်ဆောင်နေရတဲ့ ဘဝတခုဖန်တီးမဲ့ အစား ကိုယ့်ဘဝရဲ. အနာအဆာ အားနည်းချက်တွေကို လက်ခံပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည့်မှု အပြည့်ရှိရင် အဲဒီလူဟာ အများထဲမှာ ပိုလှပ တောက်ပနေမှာပါ။ လူတိုင်း သဘောတူမှာ မဟုတ်တဲ့ ကျမရဲ. ကိုယ်ပိုင် အယူအဆလေး တခုပါ။